Vaovao - Ahoana no hamantarana ny karazana prototype haingana indrindra?
Ahoana ny fomba hamantarana ny karazana prototype haingana indrindra?
Rehefa manohy ny dianao mandroso sy mitondra vokatra vaovao eny an-tsena ianao dia manana andiana fanapahan-kevitra raisina momba ny prototyping - na handefa fitaovana na vokatra rindrambaiko ianao, na ny fitambaran'izy roa - mila manana prototype vita ianao.
Rehefa avy nametraka tamim-pahombiazana ny fototry ny fizotran'ny fampandrosoana ianao ary nampiomana ny maodelin'ny CAD dia tonga amin'ny safidy manaraka ianao. Alohan'ny hanaovana prototype ny zavatra noforoninao dia mila manapa-kevitra ianao hoe karazana prototype inona no haorinao. Na manao ny tenanao ianao na manakarama orinasa prototyping haingana dia tokony ho fantatrao ny tanjona hotanterahin'ilay prototype satria hanampy amin'ny fisafidianana fomba sy teknika ary fitaovana ilaina amin'ny fananganana izany. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia andao isika hamaky ireo karazana prototypes sy tanjona ao ambadiky ny fananganana azy ireo.
Ity karazana ity dia matetika ampiasaina ho toy ny fanehoana tsotra ny hevitry ny vokatrao, handrefesana ny refy ara-batana ary hahitana ny endriny masiaka. Ilaina indrindra izy io amin'ny fanaovana maodelim-batana amin'ny vokatra sarotra sy lehibe nefa tsy manambola vola be hatramin'ny voalohany. Mockup dia tonga lafatra amin'ny fikarohana tsena voalohany sy karazana fitsapana aloha.
Ity karazana prototype ity dia natsangana rehefa mila manamarina ny hevitrao ianao ary manaporofo fa azo tanterahina izany. Izy io dia mora ampiasaina rehefa manatona ireo mpiara-miombon'antoka sy mpamatsy vola.
Prototype mandeha ho azy
Ity karazana prototype ity dia antsoina koa hoe maodely "toa- ary toa azy" satria samy manana ny lafiny teknika sy fahitana ny vokatra aseho. Izy io dia ampiasaina hanandramana ny fiasan'ny vokatra, hanaovana fanadihadiana amin'ny mpanjifa, ary fanentanana fitadiavam-bola.
Prototype alohan'ny famokarana
Ity no karazana sarotra indrindra izay natao tamin'ny dingana farany amin'ny fampandrosoana ny vokatra. Izy io dia ampiasaina amin'ny ergonomika, fanamboarana ary fanandramana ara-pitaovana, ary koa hampihenana ireo risika mety hitranga mandritra ny fanamboarana. Modely ampiasain'ny mpanamboatra hamokarana ny vokatra farany.
Misafidy ny hiara-hiasa amin'ny orinasa Prototyping
Zava-dehibe ny manamarika fa ny prototyping dia dingana miverimberina. Izy io dia fampifangaroana ny kanto sy ny siansa izay manampy anao hamantatra ny fahafaha-manana tanteraka ny vokatrao, izay mampitombo ny fahafaha-manao fahombiazana eo amin'ny tsena. Noho izany, mety handalo karazana prototypes maromaro ianao, miaraka amina karazana isan-karazany mazàna mitaky kinova vitsivitsy hahatratrarana ireo masontsivana napetrakao amin'ilay maodely.
Ary ity fizotrany ity dia mitaky fanampian'ny orinasa manangana prototypes na ekipa fampandrosoana ny vokatra matihanina. Azonao atao ny manomboka mitady ilay iray taorian'ny nataonao ho fihomehezana voalohany na porofon'ny foto-kevitrao. Soso-kevitra izy satria ny famoronana prototypes sarotra kokoa dia midika hoe fampiasana fitaovana arifomba, fampidirana fitaovana sy singa mety ho lafo na sarotra atao raha tsy misy tambajotran'ireo mpamatsy. Fanampin'izay, ny fahaiza-manao sy ny traikefa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famoronana prototypes kalitao. Raisina an-tanana ireo lafin-javatra telo rehetra - fitaovana, traikefa ary fahaiza-manao, fa hendry ny mamoaka ny filanao prototyping amin'ny orinasa matihanina.
Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Cnc Prototyping, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Prototyping haingana, Prototyping haingana,